तपाईको आज (मंगलबार) को राशिफल भन्छ–आज यी सात राशिकाले पुर्याउनु पर्नेछ विशेष ध्यान !
गनशीलताले विद्या तथा धन आर्जन हुनेछ भने काममा पनि सफलता मिल्नेछ। लेखनकलामा निखारता ल्याउन अझ मेहनत गर्नुपर्ला। परिस्थितिसँग सम्झौता गर्नुपरे पनि लक्ष्य पहिल्याउन सकिनेछ। ईर्ष्या गर्नेहरूले भने अलि दुःख दिनेछन्। आत्तिने बानीले बोलीको गलत अर्थ लाग्न सक्छ। तापनि सहयोगीहरूले साथ दिनेछन्। रोकिएका काम सम्पादन गर्न सकिनेछ।
मिहिनेत परे पनि भविष्यका लागि जग बसाउने अवसर प्राप्त हुनेछ। सामाजिक काममा रुचि बढ्नेछ। आवश्यक पर्दा सहयोगीहरूको साथ पाइनेछ। शक्तिको धाक देखाउनेहरू स्वतः निहुरिनेछन्। धार्मिक र सेवामूलक कामले प्रतिष्ठा दिलाउनेछ। रोकिएको कामले पनि निकास पाउनेछ। फजुल खर्च भने बढ्न सक्छ। विश्वासघात गर्नेहरू सक्रिय रहनेछन्।
छिटो फल प्राप्त गर्ने आकांक्षाले समस्या निम्त्याउनेछ। अरूका लागि बुद्धि र श्रम खर्चनुपर्ला। समयतालिका नमिल्दा योजना अधुरै रहनेछ। हल्लाको पछि लाग्दा व्यर्थैमा दुःख पाइनेछ। आफ्ना कामबाट अरूले फाइदा उठाउने चेष्टा गर्लान्। तर मिहिनेत गर्दा बौद्धिक क्षेत्र फराकिलो बन्नेछ। सहपाठीहरूलाई उछिन्दै पुरस्कार, प्रशंसा आदि प्राप्त गर्न सफल भइनेछ।
२०७८ असार १ गते, मंगलवार,( १५ जुन २०२१)
तपाईको आज (सोमबार) को राशिफल, हेर्नुहोस् आज क–कसलाई छ त शुभ ?
तपाईको आज शनिवारको राशिफल, हेर्नुहोस् आज क-कसलाई छ त शुभ ?
तपाईको आज शुक्रबारको राशिफल भन्छ–आज यी ६ राशिकाले पुर्याउनुपर्नेछ विशेष ध्यान !
आज विहीवार, राशिफल हेरेर गर्नुहोस् तपाईको आजको दिनको सुरुवात !
तपाईको आज बुधवारको राशिफल भन्छ–आज यी चार राशिकाले पुर्याउनु पर्नेछ विशेष ध्यान !
आज मंगलवार, राशिफल हेरेर गर्नुहोस् तपाईको आजको दिनको सुरुवात !
आज साउन महिनाको दोस्रो सोमबार, हेर्नुहोस् कस्तो छ तपाईको आजको राशिफल ?